October 2019 - Online Bunner
October 30, 2019 Online Bunner 0
အပ်ိဳ စစ္စစ္ မ်ားသာ ဖတ္ရန္ ေခါင္းစဥ္ၾကည့္ျပီး တမ်ိဳး မထင္ပါနဲ ့ေနာ္….အအိုေတြဖတ္မိရင္ စိတ္ဓါတ္က်မွာစိုးလို ့ပါ…. အပ်ိဳစစ္စစ္ဆိုတာက ခုေခတ္က ၁၆ နွစ္၁၇နွစ္ဆိုရင္ကို ရည္းစားက ရွိေနၾကတာ ။ ရည္းစားျဖစ္တာ ၁ ရက္မၾကားဘူး living together က ေနေနၾကျပီေလ… တကယ္ေတာ့ […]
October 27, 2019 Online Bunner 0
၁။ မနက် စောစောထခြင်း အောင်မြင်သူအများစုဟာ မနက်စောစော ထတက်တဲ့ အလေ့အကျင့် ရှိကြပါတယ်။ လူတော်တော်များများ အိပ်ယာထ ပျင်းတက်ကြပါတယ်။ အောင်မြင်သူ တွေကတော့ အိပ်ယာက ထရတာကို ပိုကြိုက်ကြပါတယ်။ သူတို့ အိပ်ယာက နိုးပြီဆိုတာနဲ့ သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ အိမ်မက်တွေ ဆက်လက်အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်မှာ မို့်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် […]
“ကံကောင်းချင်ရင််် “စိတ်”ကောင်းကောင်းထားပါ ဘုရားရှိခိုးဖို့လည်း မပျင်းပါနဲ့” ကံကောင်းချင်ရင််် ဘုရားရှိခိုးဖို့ မပျင်းပါနဲ့ ဘုရားရှိိခိုး မပျင်းနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတဲ့ အလုပ် မဟုတ်ဘူး တစ်နေ့လုံးသုံးဖို့ စိတ်တန်ခိုး ထုတ်လုပ်တာ စိတ် ဓါတ်ဆီ ထည့်တာ စိတ် စက်ဆီ ဖြည့်တာ။ သန့်စင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်အောင် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို […]
October 25, 2019 Online Bunner 0
အရက်အရမ်းသောက်ခဲ့တဲ့ညီ တယောက် အခုတော့ အသဲမှာအနာဖြစ်လို့ ဆေးရုံခနခဏ တက်နေရပြီ။ဆေးရုံတက် ဆေးစစ်လိုက်တော့ အသဲကင်ဆာတဲ့။ အသဲကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ ညီအတွက် သူမိသားစုတခုလုံးက စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်နေရပြီ။ တမိသားစုလုံးလည်း မနားရ ဆေးရုံတက်တော့ အစောင့်က နှစ်ယောက် စောင့့်ရတယ်။ သွေးသားဖြစ်နေတော့လည်း ရောဂါပျောက်ရေး ဘယ်ဆေးကောင်းမလဲ စုံစမ်းရသေးတယ် ဆေးရုံက ခွဲစိတ်ကုသလည်း […]
October 23, 2019 Online Bunner 0
အရင်က Online မှာ ဖင်တပြပြနဲ့ ဓာတ်ပုံတင်တဲ့ မော်ဒယ်ယောင်ယောင်တွေ မော်မဒယ် တဒယ် တွေ တွေ့ရင် အံသြမိတယ် …. ဒီမိန်းမတွေ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဒီဖင်ကြီးပဲ ဘာလို့ ပြပြနေလည်းပေါ့ တစ်ခါတလေ ဆို ဖင်အတုလား အစစ်လား အငြင်းပွားမှုတွေလည်း နေ့တဓူဝ ဖြစ်ကြ ၊ […]
တချို့သူတွေက ရွှေတစ်မတ်သားလက်စွပ်လေး ဝတ်ထားတဲ့အကြောင်းကို ရွှေဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတဲ့သူကိုမှ သွားကြွားမိတတ်ကြတယ်…. တချို့သူတွေက Hijet ကားလေးစီးနိူင်တာကို အိမ်ကကားနဲ့လေ အိမ်ကကားနဲ့လေဆိုပြီး သွားသွားကြွားပြနေတာ car show room ပိုင်ရှင်ကြီးမှန်း မေ့နေတတ်ကြတယ်…. တချို့သူတွေက အင်္ဂလိပ်စကား ကိုယ်သိကိုယ်တတ် ဆိုပြီး လူတွင်ကျယ် ဝင်ဝင်စွာတတ်တာ သူတို့ကို ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ပြီး ကြည့်နေတဲ့သူက […]
October 14, 2019 Online Bunner 0
တောင်​ကိုရီးယား ရဲ့ နာမည်​​ကြီး အဆိုတော်နဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Fx ကေ့ပေါ့ပ်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆောလီကို ဒီနေ့ ကိုးရီးယားစံတော်ချိန် ညနေ ၄နာရီခွဲ အချိန်လောက်မှာ သူ့ရဲ့ နေအိမ် တိုက်ခန်းထဲ သေဆုံးလျက်သား တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က အတည်​​ပြု သတင်းထုတ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ် တောင်ကိုရီးယားနာမည်ကျော် ဆောလီဟာ သူ့ရဲ့ နေအိမ်တိုက်ခန်းမှာ […]
အရင်က ဇော်ဂျီသုံးနေရာကနေနိုင်ငံတကာ ခေတ်မီအောင်၊ နိုင်ငံ့အဝှမ်းက သတင်းတွေကို လွယ်ကူစွာ သိခွင့်ရရှိအောင်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံက ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကမ္ဘာက အမှန်တရားအတိုင်းသိခွင့် ရရှိအောင်၊ (ဒီအထဲမှာ အဆင်ပြေမှု၊ အဆင်မပြေမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အကျင့်ပျက်မှု အစရှိသဖြင့်ပေါ့) လွယ်လွယ်နဲ့ အလိမ်မခံရအောင်၊ လျင်လျင်မြန်မြန် translate လုပ်လို့အဆင်ပြေမယ့် Unocode […]